Ukwabelana ngeeprojekthi kwiSikhululo sikaloliwe saseWuhu kwiPhondo laseAnhui
Isikhululo sikaloliwe iWuhu, esinendawo engama-50,000 m2, sesona sikhululo sikhulu kumgca weNanjing ukuya kwi-Anqing Inter-city Railway ngaphakathi kwiPhondo laseAnhui. Kule projekthi, i-Rapid Scaffolding yawongwa ngokubonelela ngenkqubo ye-scaffolding njenge-shoring, phantsi komqadi omkhulu we-2.2 × 2.4m, isebenzisa i-0.9 × 0.9m ...
Inkqubo yoKwabelana kunye neFomwork yaseHong Kong- iZhuhai-Macau Bridge
IHong Kong-Zhuhai -Macau Bridge yiprojekthi yokwakha eqhubekayo enoluhlu lweebhulorho, iitonela kunye neziqithi ezingezizo eziza kudibanisa iHong Kong, iMacau neZhuhai. Inkqubo yethu yokunkqonkqoza kunye neefomwork ziyawongwa ukuba zisetyenziswe kwesinye seziqithi eziphambili-West Ar ...
Imidlalo yeOlimpiki yaseBeijing yoNyaka omnye yokuBala kweNdibano
Ngunyaka owodwa wokubaleka kwimidlalo yeOlimpiki yaseBeijing ngomhla we-8 kweyeThupha ku-2007. Amagosa e-IOC nabameli abasuka kumazwe angama-205 nakwimimandla bazimasa le mibhiyozo. Inkampani ethengisa ngokukhawuleza ekhawulezileyo ifumene i-odolo yokuma kwiMidlalo yeOlimpiki yokuVulwa kunye nokuValwa kweZiko lokuSebenza malunga ...
Inkampani yaseTaiwan'S Formosa Plastics
Ukukhawulezisa ukunikezela okusetyenzisiweyo njengoMsebenzi woLondolozo kwiAsia Symbol Factory
Umzi mveliso wesibini weAsia Symbol ngowona mgca mkhulu wemveliso yokutsala kube kanye emhlabeni. Bafuna ukugcina umzi-mveliso wabo minyaka le njengovavanyo oluqhelekileyo. Ngokukhawuleza banikwe izinto zokwenza umsebenzi wokulungisa, kwaye kwathatha kuphela iiyure ezingama-24 ukugqiba ulwakhiwo ...
Ukwabelana ngeThafa kunye neFomwork yeMiboniso yeSizwe kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai)
Ngommandla omalunga ne-855,946.8 yeemitha zesikwere. Ukukhawuleza kwabasebenzi kuthathe iprojekthi yomboniso we China Expo (North Block) EPC Injineli (Icandelo lesiBini). I-C1 16m yeholo ephezulu yommandla wenkqutyana yeeprojekthi. Indawo ye-C1 kumgangatho ophezulu we-5 imigangatho enobude obupheleleyo bokwakha be-32m, Ti ...
Ingqungquthela yezemidlalo yaseNantong kunye neZiko leMiboniso
Nge-15 ka-Okthobha ka-2006, umdlalo wezemidlalo we-16 wePhondo laseJiangsu kunye nomboniso wangokuhlwa owawubanjelwe kwiNgqungquthela yezeMidlalo yaseNantong kunye neZiko leMiboniso. Ingqungquthela yezemidlalo yaseNantong kunye neZiko leMiboniso libizwa ngegama elithi "ibala lezemidlalo laseTshayina laseMzantsi Afrika", utyalo-mali luphela zii-2200 yezigidi zeRMB, yilenqindi lenqindi elisebenzisa i-hu ...
Ukwabelana ngeFomwork yeNanjing Metro
Isikhululo sikaloliwe esingaphantsi komhlaba seNanjing senziwe njenge-2-bay kunye ne-2-storey kwisikhululo seqonga esingaphantsi komhlaba. Igumbi eliphambili kwigumbi elingaphantsi kwegumbi ezimbini yi-6.28m, kwaye kwigumbi elingaphantsi elinye li-4.85m. Isakhiwo esiphambili sesitishi sakhiwe ngokusebenzisa indlela evulekileyo yokusika, kunye ne-2-bay kunye ne-2-storey isakhiwo sebhokisi phantsi komhlaba. I-dimensio ...
Iiprojekthi zoKwabelana ngeSikhululo senqwelomoya saseNanjing Lukou
Iprojekthi yesikhululo senqwelomoya senqwelomoya iNanjing Lukou International Airport (icandelo le-F1-3), ebekwe kwiitheminali ezintsha ezisemazantsi, malunga ne-796m ubude, ibandakanya ibhokisi ye-orifice ephindwe kabini yomgaqo we-u kunye nendlela ngokubanzi. Iprojekthi yokwandiswa kwesigaba sesibini sokuqina yi-1100 mm. Idisk yokutshixa intsimbi ...